ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: NLD ရဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းလုံးကျွတ် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲမှာ ပြည်သူအားလုံးနီးပါးက ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ဖို့ ထောက်ခံ (ရုပ်သံ)
NLD ရဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းလုံးကျွတ် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲမှာ ပြည်သူအားလုံးနီးပါးက ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ဖို့ ထောက်ခံ (ရုပ်သံ)
လက်ရှိ အာဏာကို (ဇွတ်) ယူထားသူတွေက ပြည်သူတွေ
ရဲ. သဘောထားကို .. ပေါက်ပြီးသား ။
၂၀၀၈ ဖွဲ.စည်းပုံပြင်ဖို. ကိစ္စ ကို
အလကား ရူးချင်ဟန်ဆောင် . . အချိန်ဆွဲနေတာပါ ။